सरकारी जग्गामा निजीको हालीमुहाली
निको भएका २२५,९६०
अपडेटः 2020-04-03 22:15:19बजे ।
काठमाडौं, Feb 24, 2020
निजी स्वास्थ्य संस्था दीर्घायु गुरु हस्पिटलले सरकारी जग्गा हडपेको खुल्न आएको छ। दीघार्यु गुरु हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर काठो चाबहिल मित्रपार्कमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने जग्गामा भवन बनाएको पाइएको हो।
मालपोत कार्यालय चाबहिलबाट नागरिकलाई प्राप्त कागजातमा दीघार्यु गुरु हस्पिटलले करिब डेढ रोपनी सरकारी जग्गा हडपेर संरचना निर्माण गरी उपभोग गरिरहेको देखिन्छ। उक्त ठाउँको जग्गा अहिले आनाको पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढीमा किनबेच हुनेगर्छ।
काठमाडौं महानगरपालिका–७ सिट नम्बर १०६७–१२ को कित्ता नम्बर ३४ मा उल्लेखित एक रोपनी पाँच आना तीन पैसा दुई दाम क्षेत्रफलमा फैलिएको जग्गा दीघार्यु गुरु हस्पिटलले हडपेको पाइएको छ। मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त जग्गाधनी स्रेस्ता कागजातमा उक्त सिट र कित्ता नम्बरमा भएको जग्गा जग्गाधनीको नाम नेपाल सरकार उल्लेख छ। सरकारको नाममा रहेको उक्त जग्गा हडपेर निजी अस्पताल सञ्चालन गर्दा पनि जिम्मेवार निकाय भने मौन छ।
प्रकाशित मिति: Feb 23, 2020 23:48:50
कोरोना भाइरस : डरलाग्दो छ यी तीनको संघर्ष-कथा
डेरावासीहरुका अध्यक्ष भन्छन्, ‘स्थानीय तहको नेतृत्वमा १ महिना घर भाडा छुट गराऔँ (भिडियोवार्ता)
बफादार कुकुर लकडाउनमा किन छन् आक्रामक?
भावनामा ओतप्रोत देशप्रेम र सरकारको सामर्थ्य
कोरोनाको झ्यालबाट हेर्दा
स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्दैन र!
कोरोना भाइरसबारे सहयोग माग्ने अमेरिकी युद्धपोतका कमाण्डर यसकारण भए 'जिम्मेवारीमुक्त'
लकडाउनको ११ औँ दिन- पाटन दरबार क्षेत्र (फोटो भिडियो)
विद्धान शिक्षक प्रकृतिको लद्दु विद्यार्थी हामी मान्छे
गन्धर्वलाई रोगभन्दा भोकको चिन्ता (भिडियाे)
लकडाउनमा चक्रपथलाई घुमेर हेर्दा (तस्बिरहरू)
कोरोनाका कारण युरोपकै सबैभन्दा कम उमेरका किशाेरको पोर्चुगलमा निधन
दाहसंस्कारमा ‘नो डिस्काउन्ट’
ट्रम्पका '७ ब्लन्डर' जसले बनाए कोरोना संक्रमणमा 'अमेरिका फस्ट'